२०७८ श्रावण २६ मंगलबार ०९:१०:००
एमालेको संस्थापन पक्षले संगठनात्मक संरचनामा उथलपुथल आउने गरी विधान संशोधनको मस्यौदालाई एकतर्फी रूपमा अगाडि बढाएपछि पाँच महिनादेखि जारी एमाले विवाद विभाजनतिर ढल्केको छ । संस्थापन पक्षले सोमबार केन्द्रीय कमिटीबाट विधान संशोधन मस्यौदा पारित गरेपछि एमालेमा एकताको प्रयास कमजोर र विभाजनको सम्भावना बलियो बनेको छ ।
पार्टी एकताका लागि दुई अध्यक्षको विषयमा चर्चा चलिरहेका वेला ओलीले अहिलेभन्दा पनि शक्तिशाली अध्यक्ष हुने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाएका छन् । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने अध्यक्ष ओलीलाई थप शक्ति आवश्यक रहेको भन्दै विधानमा अधिकार थप्नुपर्ने व्यंग्यात्मक प्रस्ताव गरेका छन् । ‘हाम्रो पार्टीका अध्यक्षलाई आममाफी दिने अधिकार हुनेछ भन्ने र पार्टी अनुशासनात्मक कारबाही शीर्षकअन्तर्गत केही बुँदाहरू थपौँ, पार्टी अनुशासन उल्लंघन गर्नेहरूमध्ये प्रकृति हेरेर कतिलाई अपराधी भन्न सकिनेछ, कतिलाई गद्दार भन्न सकिनेछ र कतिलाई देशद्रोही पनि भन्न सकिनेछ भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरौँ,’ स्थायी कमिटी बैठकमा गौतमको प्रस्ताव थियो ।
संविधान र नियमअनुसार राजनीतिक दलले गर्नुपर्ने प्रावधान पूरा गरेर अगाडि बढ्छौँ : विरोध खतिवडा एमाले नेता (नेपाल पक्ष)
तपाईंहरूले सम्मानजनक एकताका लागि संगठनात्मक गतिविधि रोक्न संस्थापन पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको थियो, तर ओलीले बैठक राखेर विधान नै संशोधनको प्रस्ताव पारित गर्नुभएको छ, यसमा तपाईंहरूको प्रतिक्रिया के छ ?
यो गुटले २८ फागुनयता गरेका हरेक निर्णय अमान्य छन् । गुटको बैठकले गरेको निर्णय पार्टीको निर्णय होइन, हामीलाई स्वीकार्य छैन । उनीहरू गुटको बैठकबाट निर्णय गरेर पार्टीको निर्णय भनिरहेका छन्, यो भ्रम हो । २ जेठको केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेपछि त्यसबाट हुने निर्णय मात्रै पार्टीका निर्णय हुन् ।
त्यसैले योे ओलीको पार्टी विभाजन गर्ने मनसायको अभिव्यक्ति हो । हामी पनि हाम्रो अस्तिको केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय गर्न सक्थ्यौँ । तर, हामीले केही पनि गरेनौँ, किनभने पार्टी एकता हाम्रो प्राथमिकता हो ।
२४ गतेका लागि बोलाएको बैठक, पार्टी सदस्यता वितरण र अधिवेशनलगायत सबै गतिविधि रोक भनेर पार्टी एकताका लागि अवसर दियौँ । उनीहरूले बैठक २५ गतेका लागि त सारे, तर त्यो मौकालाई दुरुपयोग गर्दै जे–जस्ता निर्णय गरे ती सबै गुटका निर्णय हुन् । यसबाट ओली पार्टी एकता चाहँदैनन् भनेर दुनियाँले बुझ्ने गरी प्रस्ट भएको छ । हामी यहीअनुसार अगाडि बढ्छौँ ।
तपाईंहरूको आग्रहअनुसार नै ओलीले बैठक एक दिन त सारेकै हो, तर पनि किन सहमति हुन सकेन ?
यसको कारण ओलीको बेइमानी हो । ओली स्वयंले एक चरणमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ र विष्णु पौडेललाई पठाएर, दोस्रो चरणमा हाम्रो पक्षका भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई बोलाएर र तेस्रो चरणमा माधव नेपालका सम्धी सोमप्रसाद पाण्डेलाई पठाएर विभिन्न प्रस्ताव पठाए । त्यस प्रस्तावमा उनले दुवैजना बराबरी हैसियतको अध्यक्ष बन्ने, दुवैजनाको हस्ताक्षर चलाउने, पार्टीका सबै संरचनालाई २ जेठमा फर्काउने भनेर भनेका थिए ।
ओलीले त्यसका लागि तीनवटै टोलीसँग माधव नेपाललाई मनाउनुपर्‍यो म तयार छु भनेपछि सबैले प्रयास गर्नुभयो । सबैले मिहिनेत गरेर दुई अध्यक्षमा बस्दै बस्दिनँ भनेका माधव नेपाललाई अनुरोध गरेपछि उहाँले लिखित रूपमा लेखेर ल्याउनुहोस् भन्नुभयो । त्यसपछि जब उत्साहका साथ सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे ओलीलाई यो कुरा लिएर भेट्न जानुभयो उहाँले मान्दिनँ भन्दिनुभयो ।
त्यसपछि उहाँहरूले हिजोअस्ति तपाईंले नै भनेको कुरा के हो भनेर सोध्दा, हिजोअस्तिको कुरा सकियो म मान्दिनँ भनेर पठाउनुभयो । त्यसैका कारण अहिले उहाँकै क्याम्पमा पनि विश्वास गुमाउँदै जानुभएको छ । हाम्रा साथीहरूमा कुनै भ्रम थियो भने त्यो टुटेको छ ।
सम्मानजनक एकताको अर्थ समान हैसियतको अध्यक्ष र हस्ताक्षरमा संस्थापन पक्ष तयार भएन भन्ने देखिएपछि पनि तपाईंहरू अझै एकताको अर्को विकल्पको खोजीमा हुनुहुन्छ ?
हामीले यतिसम्म प्रयास गर्दा पनि ओली एकल चलो भनेजस्तो गरी हिँड्नुभयो । उहाँ सिंगो एमालेको अध्यक्ष नभएर भुरे–टाकुरे एउटा जमानत जफत हुने पार्टीको अध्यक्ष हुन रुचाएका छन् भन्ने यसबाट प्रस्ट बुझियो । उहाँ नै यसरी अगाडि बढेपछि एकताको विषयमा कसरी छलफल गर्ने ? जब उहाँ आफैँले बोलेको कुरामा नटिक्ने मान्छेसँग थप विकल्पमा कसरी जानु !
अब राजनीतिक कोर्स नयाँ ढंगले अगाडि बढ्छ । यो तपाईंले चाँडै नै थाहा पाउनुहुन्छ । हामी राजनीतिक प्राणी हौँ, यत्तिकै बस्दैनौँ । संविधान, कानुन, नियमअनुसार राजनीतिक दलले पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान पूरा गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ ।
माधव नेपालसहितको एकताका लागि कोसिस गर्ने, सहमति भएन भने विघटित कार्यदलका सदस्यसहितको स्थायी समितिबाट एकढिक्का भएर निर्णय गर्ने तपाईंहरूको निष्कर्ष थियो ? अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
यति भएपछि त अब स्थायी कमिटी मात्रै होइन, कुनै पनि साथीहरूलाई द्विविधा रहेन । केपी ओली को हो भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । त्यति हुँदा पनि कोही अलमलिन्छ भन्ने लाग्दैन ।
एमालेको एकता धेरै नै जोखिम भयो कि नाटकीय रूपमा सहमति जुटाउने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
मचाहिँ देख्दिनँ, सकियो ।
सरकारमा तपाईंहरू अब सामेल हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ?
एउटा बिन्दुको लडाइँ सकिएपछि सरकार त्यसपछिको विषय हो । हामीले पुनर्स्थापना गरेको संसद् हो, हामीले बनाएको सरकार हो । त्यसकारण सहभागी भयौँ भने कुनै अनौठो होइन ।
एमालेमा रहन नचाहनेहरू बाहिरिने सामान्य हो, यसमा कसैले आश्चर्य मान्नुपर्दैन : खगराज अधिकारी एमाले नेता (ओली पक्ष)
एकता प्रयास चलिरहेकाले संगठनात्मक गतिविधि रोकेर सहमति गरौँ भन्ने अर्को पक्षको प्रस्ताव थियो । तर, तपाईंहरूले विधानकै मस्यौदा बनाएर छलफलमा पठाउने निर्णय गरेपछि पार्टी ब्रेक हुनेतिर गयो भन्ने अर्थ लाग्छ कि लाग्दैन ?
विधानको मस्यौदा त महाधिवेशन समयमा गर्नका लागि हो । महाधिवेशन समयमा नगरेर कांग्रेसको जस्तो सत्ताको दुरुपयोग गरेर बच्नुपर्ने पार्टी किन बनाउने भन्ने भएर अघि बढाइएको हो । यसमा एक महिनाको समय हुन्छ । पार्टी सदस्यले छलफल गर्ने हो । अहिले सुझाब लिनका लागि छलफल गर्ने भनिएको हो, संशोधन गर्ने भनिएको होइन । अरू संगठनात्मक ढाँचामा हामीले केही गरेका छैनौँ । हामीले प्रस्ताव मात्रै गरेका छौँ । उहाँहरू आएर त्यसैमा सामेल हुन सक्नुहुन्छ । के–के गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ भन्दा हुन्छ । यसले वार्तालाई कुनै डिस्टर्ब गर्दैन ।
विधानमाथि आज जे निर्णय गर्नुभएको छ, अब तपाईंहरू माधव समूहलाई पर्खन सकिन्न, आए ढोका खुलै छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो ?
नेकपा एमाले प्रमुख पार्टी हो । मुलुकमा यत्रो महामारी छ, सरकारले यत्रो मनपरी बोलिरहेको छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समस्या भन्छ । त्यो हाम्रो पवित्र जग्गा हो, त्यसैलाई समस्या भन्छ । तुइन चुँडालेर नागरिक बेपत्ता भएको अवस्था छ । सरकार मूकदर्शक छ । हाम्रोजस्तो प्रमुख पार्टी चुप बस्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हामी कसैलाई गालीगलौज पनि गर्दैनौँ, आरोप–प्रत्यारोप पनि गर्दैनौँ । यस्तो वेलामा ठूलो पार्टीले केही न केही गतिविधि त गरिहाल्छ । यसले एकतामा कुनै समस्या गर्दैन ।
दुई अध्यक्षमा सहमति खोज्न अन्तिम प्रयास किन असफल भयो ?
यसमा सबै समेटिनुपर्छ भन्ने हो । केपी ओलीले त आफ्नो विषय स्पष्ट राख्नुभएको नै छ । जुन सार्वजनिक भइसकेको छ । अव माधव नेपालले के गर्नुहुन्छ भन्ने हो । अहिले नै सफल वा असफल भन्ने वेला भएको छैन ।
तपाईंहरू मिलाउनका लागि कतिसम्म लचिलो हुनुहुन्छ नि ?
पार्टीको सिद्धान्त, नीति, दर्शन, दृष्टिकोण र एमालेको विधानभित्र रहेर हामी सकेसम्मको लचिलो हुन्छौँ । अहिले पनि देखिएको छ, त्यत्रो ह्विप उल्लंघन भएको छ, फ्लोर क्रस भएको छ, प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी त्यो पनि दक्षिणपन्थी पार्टीको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाइरहेका छन् । यसमा पनि ‘एम्नेस्टी इज ग्रान्टेड’ भनिसकेपछि लचिलो हुने ठाउँ बाँकी छ र अब ? छ भने त्यो पनि गरिन्छ ।
नेपाल पक्षले प्रतिक्रियात्मक रूपमा सरकारमा जाने निर्णय गर्‍यो भने स्थिति के हुन्छ ?
सरकारमा सामेल हुनेहरू एमालेमा रहँदैनन्, एमालेमा रहनेहरू सरकारमा जाँदैनन् । एमालेमा रहनेहरू प्रतिक्रियावादी गठबन्धनमा सामेल हुने कल्पना गर्न सकिँदैन ।
एकता जोखिममा छैन, सामान्य अवस्थामा नै छ । एमालेमा रहन चाहनेहरू पार्टीमा फर्किने र नचाहनेहरू बाहिरिने सामान्य हो । यसमा कसैले आश्चर्य मान्नुपर्दैन । किनभने हदैसम्मको अराजकता हामीले आज सहेका छौँ ।